Chess 🥇 Faka futhi udlale i-Chess ku-Emulator.Online
Chess: Idlalwa kanjani igxathu negxathu 🙂
Ukudlala i-Chess online mahhala, landela lezi zinyathelo ngezinyathelo:
I-Paso 1. Vula isiphequluli sakho osithandayo bese uya kuwebhusayithi ye-Emulator.online yomdlalo.
I-Paso 2. Ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi, umdlalo uzovele uboniswe esikrinini. Kufanele kuphela hit play.
Isinyathelo se-3. Ipulatifomu ikuvumela ukuba ukhethe phakathi kokudlala ngerobhothi noma ukudlala ngomunye umuntu onani. Can "Faka noma susa umsindo", khetha i-"Izinga lokudlala”Faka isithombe ku"isikrini esigcwele"futhi usulungile!.
Isinyathelo se-4. Umsebenzi wakho kuzoba ukushiya inkosi ngaphandle kokunyakaza okungenzeka, ukhumbula njalo imithetho yomdlalo. TO
Isinyathelo se-5. Ngemuva kokuqeda umdlalo, chofoza izilungiselelo ukuze udlale futhi.
Bona futhi i- Imithetho Esemthethweni ye-Chess uma ufuna ukwazi i- umthethonqubo osemthethweni wamazwe omhlaba jikelele yalo mdlalo othandwayo.
Chess kuyinto umdlalo webhodi ezokungcebeleka nokuncintisana kwabadlali ababili. Kwenziwa ebhodini lesikwele futhi kuhlukaniswe ngezikwele ezingama-64, ngokuhlukile okumnyama nokumhlophe. Ngakolunye uhlangothi kunezicucu ezimhlophe eziyi-16 kanti kolunye inani elifanayo lezingcezu ezimnyama.
Umdlali ngamunye unelungelo lokuhamba okukodwa ngasikhathi. Into yomdlalo ukuhlola umphikisi.
Kuyinto umdlalo odinga ukubonisana namasu anengqondo, akubandakanyi isici senhlanhla, ngaphandle kokudonswa kwemibala ekuqaleni komdlalo.
Ibhodi ye-chess inayo Izikwele ezingama-64 zisatshalaliswe kumakholomu ayi-8 (mpo) futhi 8 imigqa (enezingqimba), ngasinye sinezikwele eziyi-8. Izindlu ezinye zimnyama futhi zilula. Isikwele sokuqala ngakwesobunxele sebhodi kufanele kube isikwele esimnyama nesikwele sokugcina kwesokudla isikwele esimhlophe.
Ikholomu ngayinye iqokwa ngohlamvu olusuka ku- A kuya ku-H, ngenkathi imigqa ikhethwe ngenombolo evela ku- 1 ku-8 . Ngale ndlela, isikwele ngasinye siqokelwe ngohlamvu nenombolo ehambelana nekholomu nomugqa waso (a1, b6, f5, njll.). Le yi uhlelo oluhlukanisayo olujwayelekile emincintiswaneni esemthethwenis.
Umdlali ngamunye unakho Izingxenye ze-16, futhi ihlukaniswe yaba ukukhanya nobumnyama. Izingcezu, ngokulandelana kwenani:
Nota: Abanye abadlali be-chess ababheki ama-pawn njengezicucu. Amanani wocezu nawo angahluka, kufaka phakathi indawo yengcezu ebhodini.
Ekuqaleni komdlalo, izingcezu zisatshalaliswa ebhodini ngokulandelayo: izingcezu ezimhlophe zibekwe kulayini 1, ivikelwe yi- umugqa wama-pawn kulayini 2, kuyilapho izingcezu ezimnyama zikulayini 8 nezidladla zakhe ziku-7. Isaziso ngezansi:
Abaqalayo bavame ukudida isikhundla seNkosi neNdlovukazi, kodwa ukwenza kube lula, khumbula nje lokho iNdlovukazi ihlale iqala umdlalo ngokuhlala esigcawini sombala ofanayo (iNdlovukazi emhlophe e-White House, iNdlovukazi emnyama eBlack House).
Ngakho-ke, indlovukazi emhlophe ithatha isikwele D1, ngenkathi indlovukazi emnyama ihlala esigcawini D8. Lokhu kulungiselelwa kusetshenziselwa ukuvikela iSilo ekuhlaselweni khona kanye lapho kuvulwa khona, njengoba kungaba njalo uma iNdlovukazi ephikisayo ibibekwe kufayela elifanayo.
Ibhodi lihlukaniswe ngamaphiko amabili:
Izingcezu ziqanjwe ngephiko lakhe. Imibhoshongo in a1 y a8, ngokwesibonelo, bayabizwa ITower-Lady, ngenkathi imibhoshongo ingena h1 kanye no-h8, UTorre-Rei. Kwenzeka okufanayo nangezinye izingcezu, futhi nangama-pawn, aqanjwe ngocezu abaluvikelayo. I-pawn in e2 inkosi yamaphakethe, i-pawn in d2, indlovukazi yamaphakethe, i-pawn in f2 ibizwa ngokuthi inkosi yamabhishobhi-umbhishobhi kanye ne-pawn in c2, indlovukazi yamabhishobhi-umbhishobhi, njalonjalo.
I-Chess ngumdlalo wakudala kangangoba, kuyo yonke iminyaka yokuba khona kwayo, kwakukhona izindaba ezahlukahlukene ezihambisana nemvelaphi yayo.
Imvelaphi yeChess eNdiya
Indaba yokuqala eyashiwo emhlabeni wonke yenzeka endaweni ye- India. Kwakukhona idolobhana elincane elibizwa UTaligana, nendodana eyodwa kuphela yamaqhawe URajah wafa empini enegazi.
URajah wawela ekucindezelekeni futhi akazange akwazi ukubhekana nokulahlekelwa yindodana yakhe. Inkinga enkulu ukuthi i-rajah ayigcinanga nje ngokufa kancane kancane, kepha futhi yayingawunaki umbuso wayo. Kwaba yisikhashana nje ngaphambi kokuba umbuso uwe ngokuphelele.
Ukubona ukuwa kombuso, i-brahmin egama linguLahur Sessa, usuku olulodwa waya enkosini wayinika ibhodi equkethe izikwele ezingama-64, okumnyama nokumhlophe, ngaphezu kwezicucu ezimbalwa ezimele ngokwethembeka amabutho empi yakhe, amasosha ahamba ngezinyawo, abagibeli bamahhashi, amathangi, abashayeli bezindlovu, i-vizier eyinhloko kanye noRajah uqobo.
Umpristi utshele u-rajah ukuthi umdlalo onjalo ungathulisa umoya wakhe nokuthi uzokulapha ukucindezeleka.. Eqinisweni, noma yini uBrahman athi yenzekile, uRajah waphinde wabusa umbuso wakhe, esusa ubunzima obusendleleni yakhe.
Kwakungachazeki ukuthi konke kwenzeka kanjani, nebhodi elilodwa elinezicucu ezibhekene nokuqeda ukudabuka kwe-rajah. Njengomvuzo, i-brahmin yanikezwa ithuba lokucela lokho ekufunayo. Ekuqaleni, wasenqaba leso sipho, ngoba wayecabanga ukuthi akakufanele lokho, kepha ngokugcizelelwa nguRajah, wenza isicelo esilula.
IBrahmin imane yacela inhlamvu kakolweni esigcawini sokuqala ebhodini., ezimbili okwesibili, amane kowesithathu, ayisishiyagalombili kowesine njalonjalo kuze kube luhlaka lokugcina. URajah wayehlekisiwe yi-naivete yesicelo.
Kodwa-ke, isicelo esithobekile seBrahmin besingathobekile kangako. Ngemuva kokwenza izibalo ezahlukahlukene zokuthi bazomnika ukolweni ongakanani, bathola ukuthi kuzothatha sonke isivuno sombuso iminyaka eyizinkulungwane ezimbili ukufeza isicelo sompristi.
Ehlatshwe umxhwele ubuhlakani be-brahmin, u-rajah wammema ukuba abe yi-vizier (uhlobo lukangqongqoshe, umeluleki we-rajah) wobukhosi, futhi uSesa wamthethelela isikweletu sakhe sikakolweni.
Eqinisweni, lokho okwethulwe yi-brahmin ku-rajah kwakungewona umdlalo we-chess, bekuyiwo chaturanga, enye yezinhlobonhlobo eziyinhloko zomdlalo wanamuhla we-chess.
Okunye okuhle okuvelayo ezindabeni ezahlukahlukene ngemvelaphi ye-chess ukuthi Ares, unkulunkulu wempi, ngabe wadala ibhodi lokuhlola amaqhinga akhe empi (ezazilinganiselwe kakhulu, njengoba u-Ares wayengaziwa ukuthi unamaqhinga ezimpini zakhe, wayenolaka nje, ehlasela ngaphandle kokucacisa isikhathi esiningi).
Kodwa-ke, ucezu ngalunye lwebhodi lwalumele ingxenye yebutho lakhe, futhi kwaba njalo, kwaze kwaba yilapho u-Ares eba nendodana enomuntu ofayo, futhi edlulisela kuye izinto eziyisisekelo zomdlalo. Kusukela lapho, lo mdlalo ubuzokwazi ulwazi ngabantu abafayo.
Ukuziphendukela Kwe-Chess Emlandweni
Kuyaziwa ukuthi phakathi kuka-1450 no-1850, i-chess yaqala ukuba nezinguquko ezibonakalayo maqondana nalokho esikwaziyo namuhla. Kwakungalesi sikhathi lapho izingcezu ezahlukahlukene zathola ukunyakaza esikwaziyo namuhla, yebo, konke lokhu kuhamba nokunyakaza okuvela eChaturanga.
Indlovu (owandulelwa ngumbhishobhi wanamuhla) angahamba kuphela ngokugxuma okubili okuhambisanayo. I-vizier (owandulelayo wale ntokazi) yindlu nje esezigayeleni. Abahamba ngezinyawo abakwazanga ukuhambisa izikwele ezimbili ekuhambeni kwabo futhi i-castling ibingakabikho. Izinja bebenganyuselwa kuphela ku-vizier, obekungucucu obuthakathaka kakhulu, ngemuva kwephawundi, ngenxa yokuhamba kwabo okulinganiselwe.
Imithetho ye-chess esiyaziyo namuhla yaqala ukwenziwa 1475, awunasiqiniseko sokuthi lesi siqalo senzeke kuphi. Ezinye izazi-mlando ziyehluka phakathi ISpain ne-Italy.
Kwakungalesi sikhathi lapho abahamba ngezinyawo bathola ukuhamba esikwaziyo namuhla, okubandakanya ukuhambisa izikwele ezimbili ekuhambeni kwabo kokuqala nokuthatha abanye abahamba ngezinyawo phasa .
Ngaleso sikhathi, ukunyakaza okusha kwe ababhishobhi nendlovukazi babuye bachazwa futhi, okubaluleke kakhulu, indlovukazi yaba yingxenye ebaluleke kakhulu kulo mdlalo, yaba ukuphela kwayo ekwaziyo ukuhambisa noma ikuphi futhi iye phambili noma emuva izikwele eziningi njengoba yayifuna.
Ukuhamba kwezinye izingcezu, kanye neminye imithetho ebekiwe kuyo yonke i-chess, kwaguqulwa kuphela ngokusemthethweni maphakathi nekhulu leminyaka. XIX, futhi le mithetho isekhona nanamuhla.
Okwalabo abadlala i-chess njengokuzilibazisa, noma ngamalunga emidlalo, Imidlalo ye-chess idlalwa njalo phakathi kwabadlali ababili ebhodini elilodwa.
Kodwa-ke kulo mdlalo, imidlalo ayenzeki njalo ngale ndlela, futhi kunezindlela eziningi ongazicabanga lapho uthi shazi. Ukuqala ngobude bomdlalo, ongahluka kusuka kumaminithi ambalwa kuye emahoreni noma ngisho nasezinsukwini okumenyezelwe ukuthi uphelile, kwesinye isikhathi ngaphandle kokubulawa komdlali.
Imidlalo edlalwa ngochwepheshe cishe njalo isebenzisa amawashi alawula isikhathi somdlali ngamunye. Kwezinye izimo umdlali angadlala ngokumelene nabaphikisi abangaphezu koyedwa kumabhodi ahlukene. Amathebula awahlali eyisikwele futhi kunezindlela ze-chess ezinezingcezu ezingafika kuma-36. Ungadlala i-chess ngaphandle kokubona ibhodi!
Manje sizobona ifayela le- izindlela ezahlukahlukene ze-chess namathuba amaningi okwenza lo mdlalo uthakazelise futhi ube yinselele.
Ikilasi Chess Game
Kuyinto imodi ye-chess yendabuko, lapho abadlali bahlangana khona ubuso nobuso phambi kwebhodi.
Kuyindlela abadlali abasebenzisa ngayo amakhompyutha axhunywe kwi-Inthanethi noma kunethiwekhi yendawo, ukulandela imithetho efanayo ne- i-chess yendabuko.
Ukuhlukahluka kwe-chess yendabuko lapho kunefayela le- Umkhawulo wemizuzu eyi-15 wesikhathi somdlali ngamunye. Kule modi, abadlali abangochwepheshe abadingi ukubhala phansi amabhidi abo.
I-Chess Game ngesikhathi esisodwa
Emdlalweni we-chess kanyekanye, umdlali we-chess udlala ngokumelene nabaphikisi abangaphezu koyedwa kumabhodi ahlukene.
Kule modi umdlali akenzi bheka ibhodiKuphakathi kokusebenzisa ukuthengisa noma egumbini elihlukile. Umdlalo oyimpumputhe Kususelwa enkumbulweni yomdlali we-chess, okumele ahlobise isikhundla sebhodi futhi enze ukuhlaziywa kwengqondo.
El iposi noma incwadi chess, njengoba kwaziwa kanjalo, kuyinto Imodi ye-chess eqhutshwa kude, ngokubhalelana. Ekuqaleni, abadlali be-chess bathumele ukunikezwa kwabo ngezincwadi noma amakhadi eposi, kepha ngokuhamba kwesikhathi nentuthuko kwezobuchwepheshe, Kulezi zinsuku kungenzeka ukuthi usebenzise ama-imeyili, wehlise kakhulu isikhathi sokulinda impendulo.
Inothi lale modi lihlukile kunothi lendabuko le-chess, ikakhulukazi ngoba lenziwa ngabantu abavela kuwo wonke umhlaba, izikhulumi zezilimi ezahlukahlukene. I-epistolary chess inayo eyayo umfelandawonye wamazwe omhlaba(ICCF).
Imithetho Esemthethweni ye-Chess
IMITHETHO ESISEKELO YOMDLALO
1. Izinhloso zomdlalo we-chess.
1.1 Umdlalo we-chess udlalwa phakathi kwabaphikisi ababili abashintshanisa izingcezu ebhodini lesikwele elibizwa ngokuthi 'ibhodi le-chess'. Yena umdlali onezicucu ezimhlophe uqala umdlalo. Umdlali kuthiwa 'unethuba lokudlala' lapho isinyathelo somphikisi wakhe sesenziwe. (Bheka i-Article 6.7)
1.2 Umgomo womdlali ngamunye ukubeka inkosi yomphikisi 'phansi kokuhlaselwa' ngendlela yokuthi umphikisi angabi nakunyakaza ngokomthetho. Umdlali ofeza le nhloso kuthiwa ubulala inkosi yomphikisi futhi awine umdlalo. Akuvunyelwe ukushiya noma ukubeka inkosi yakho phansi kokuhlaselwa, noma ukuthatha inkosi yomphikisi. Umphikisi inkosi yakhe ebimhlola ubengasasebenzi kulo mdlalo.
1.3 Umdlalo uwukuthi uthayi uma kuphumela esimweni lapho akekho umdlali onethuba lokuhlola.
2. Isikhundla sokuqala sezingcezu ebhodini.
2.1 I-chessboard yakhiwe ngenethiwekhi ye- I-8 × 8 enezikwele ezingama-64 ngokukhanya okulinganayo (izikwele 'ama-blancos') futhi kumnyama (izikwele'abamnyama').
Ibhodi libekwa phakathi kwabadlali ngendlela yokuthi isikwele ekhoneni kwesokudla somdlali ngamunye kube mhlophe.
2.2 Ekuqaleni komdlalo, umdlali unezicucu ezinemibala ekhanyayo engu-16 (izingcezu "ezimhlophe"); enye inezicucu ezinemibala engu-16 emnyama (izingcezu ezimnyama “):
Lezi zingxenye zimi kanje:
Inkosi emhlophe, imvamisa ikhonjiswa ngophawu.
Intokazi emhlophe, kuboniswe ngophawu.
Imibhoshongo emibili emhlophe, kuboniswe ngophawu.
Ababhishobhi ababili abamhlophe, kuboniswe ngophawu.
Amahhashi amabili amhlophe, kuboniswe ngophawu.
Izidladla eziyisishiyagalombili ezimhlophe, kuboniswe ngophawu.
Inkosi emnyama, kuboniswe ngophawu.
Intokazi emnyama, kuboniswe ngophawu.
Ababhishobhi ababili abamnyama, kuboniswe ngophawu.
Amahhashi amabili amnyama, kuboniswe ngophawu.
2.3 Indawo yokuqala yezingcezu ebhodini imi kanjena:
2.4 Izindlu eziyisishiyagalombili ezihlelwe zibheka zibizwa ngokuthi 'amakholomu'. Izindlu eziyisishiyagalombili ezihlelwe zibheke phezulu zibizwa ngokuthi 'imigqa'. Umugqa oqondile wezikwele zombala ofanayo, ohamba usuka kolunye uhlangothi lwebhodi uye kolunye oluseduze, ubizwa ngokuthi 'yi-diagonal'.
3. Ukuhamba kwezingcezu.
3.1 Akuvunyelwe ukuhambisa isiqeshana esikweleni esivele sakhiwe esinye isiqeshana sombala ofanayo. Uma ucezu luthuthelwa esikweleni esivele selinengcezu lomphikisi, owokugcina uyabanjwa futhi asuswe ebhodini njengengxenye yokuhamba okufanayo. Ucezu kuthiwa luhlasela ucezu lomphikisi uma lungenza ukubanjwa kuleso sikwele, ngokuya nge-Articles 3.2 to
Ucezu lubhekwa njengokuhlasela isikwele, noma ngabe leso sikwele sivinjelwe ukuthuthela kulesi sikwele, ngoba ngenxa yalokho sizoshiya noma sihlasele inkosi yaso.
3.2 Umbhishobhi angathuthela kunoma yisiphi isikwele esiseduze kwe-diagonal.
3.3 Umbhishobhi angathuthela kunoma yisiphi isikwele eduze kwefayela noma umugqa okuwo.
3.4 Indlovukazi ingaya kunoma yisiphi isikwele ngasekholomu, irowu, noma idayagonali ekuyo.
3.5 Lapho enza lokhu kuhamba, umbhishobhi, u-rook noma indlovukazi akakwazi ukweqa noma yiziphi izingcezu ezisendleleni yazo.
3.6 Ihhashi lingahambela kwesinye sezikwele esiseduzane nalesi elihlala kulo. Qaphela ukuthi isikwele i-knight engathuthela kuso asikho kukholamu efanayo, irowu, noma idayagonali.
3.7 uku. I-pawn ingahanjiswa isikwele, ngokushesha ngaphambi kwayo, kufayela elifanayo, elingahlali muntu, noma
3.7.1 Ekunyakazeni kwayo kokuqala, i-pawn ingahamba njengoba kushiwo ku-3.7.a; kungenjalo, ungahambisa izindlu ezimbili kukholamu efanayo, inqobo nje uma zingavaliwe zombili, noma
3.7.2 I-pawn ingahamba iye esikweleni esihlala isiqeshana somphikisi, esiphambi kwaso, kufayela eliseduze, sithwebula leso siqephu.
3.7.3 Ipheyiji ehlasela isikwele esiwele ipheyiji lomphikisi elisanda kudlulela phambili izikwele ezimbili ngokuhamba okukodwa ukusuka esigcawini salo sokuqala lingabamba le mpahla ephikisayo kube sengathi ihambise isikwele esisodwa kuphela.
Lokhu kubanjwa kungenziwa ekuhambeni ngokushesha ngemuva kwembonakalo eshiwo ngenhla futhi kubizwa ngokuthi yisokhethi 'en passant'.
3.7.4. Lapho i-pawn ifinyelela ebangeni elikude kakhulu ngokuya ngesikhundla sayo sokuqala, kufanele ishintshwe njengengxenye yokuhamba okufanayo esigcawini esifanayo kube yindlovukazi, i-rook, umbhishobhi, noma i-knight yombala ofanayo ne-pawn. Ukukhetha komdlali akukhawulelwe ezingcezwini esezifakiwe kumdlalo.
Lokhu kushintshaniswa kwe-pawn kwesinye isiqeshana kubizwa ngokuthi 'ukukhushulwa' futhi isenzo socezu olusha ngokushesha.
3.8 Kunezindlela ezimbili ezihlukile zokuhambisa inkosi: ukuhambisa inkosi kunoma iyiphi indlu engomakhelwane engahlaselwa ngoyedwa noma ngaphezulu kwezingcezu zomphikisi.
Kungaba futhi ngokusebenzisa 'ukuguqula'. Lesi yisinyathelo esenziwe nenkosi nenye yama-rook, anombala ofanayo emgqeni wokuqala womdlali, kuthathwa njengenkosi eyodwa enyakazayo futhi kwenziwa kanjena: inkosi idluliswa isuswa endlini yayo yokuqala izindlu ezimbili zibheke embhoshongweni osendlini yakhe yasekuqaleni, khona-ke umbhoshongo udluliselwa endlini inkosi esanda kuwela kuyo.
(1) Ilungelo lokukhipha:
uma inkosi isivele yathutha, noma
ngombhoshongo osuhanjisiwe kakade
(2) I-Castling ayivunyelwe okwesikhashana:
uma isikwele inkosi ekuso, noma isikwele okumele sidlule kuso, noma isikwele esizohlala kuso, sihlaselwa ngocezu olulodwa noma ngaphezulu lomphikisi, noma
uma kukhona ucezu phakathi kwenkosi ne-rook ongasakaza ngalo.
3.9 Inkosi kuthiwa iyalawulwa uma ihlaselwa ngocezu olulodwa noma ngaphezulu lwalowo ophikisana naye, noma ngabe lezo zingcezu zibambekile, okusho ukuthi, zivinjelwe ukuphuma kuleyo ndlu, ngoba zazizoshiya noma zibeke inkosi yazo ngaphansi kwayo.
Akunasicucu esingahamba ngendlela eveza noma eshiya inkosi yaso ilawulwa.
4. Isenzo sokuhambisa izingcezu.
4.1 Ukunyakaza ngakunye kufanele kwenziwe ngesandla esisodwa.
4.2 Uma nje ezwakalisa inhloso yakhe kusengaphambili (ngokwesibonelo, ethi ngithola u- "j'adoube" noma "ngiyazilungisa"), umdlali onethuba lokudlala angathola ucezu olulodwa noma ngaphezulu ezindlini zakhe.
4.3 Ngaphandle kokunikezwe ku-Athikili 4.2, uma umdlali ithuba lakhe lokudlala lithinta
ngamabomu ucezu lwakhe olulodwa noma ngaphezulu ebhodini, kufanele adlale ucezu lokuqala oluthintekile olungasuswa, noma
eyodwa noma ngaphezulu izingcezu zomphikisi wakhe, kufanele abambe isiqeshana sokuqala esithintekile, esingabanjwa, noma
Ucezu olulodwa lombala ngamunye, kufanele abambe ucezu lomphikisi ngocezu lwakhe noma, uma lokhu kungekho emthethweni, susa noma uthathe isiqeshana sokuqala esithintekile esingadlalwa noma sithwetshulwe. Uma kungacaci ukuthi iyiphi ingxenye eyadlalwa phambilini, ucezu lomdlali uqobo lwakhe kufanele kuthathwe ngokuthi lwaludlalwe ngaphambi kophikisana naye.
4.4 Uma umdlali ethatha ithuba:
thinta ngamabomu inkosi yakho futhi i-rook kumele iphose kulolu phiko uma lokhu kuhamba kungokomthetho.
uthinta ngamabomu rook bese kuba yinkosi yakhe, akavunyelwe ukugxila kulolu phiko kulokhu futhi lesi simo kufanele silawulwe yi-Article 4.3.a
Ngenhloso yokusakaza, kuthinta inkosi noma inkosi kanye ne-rook ngasikhathi sinye, kepha ukuphosa ngapha akukho emthethweni, umdlali kufanele enze esinye isinyathelo esisemthethweni nenkosi yabo (engafaka nenqaba ngakolunye uhlangothi). Uma inkosi ingenayo inyathelo elisemthethweni, umdlali ukhululekile ukwenza noma yiziphi ezinye izinyathelo zomthetho.
ikhuthaza i-pawn, ukukhetha ucezu kuqedwa kuphela lapho ucezu luthinte isikwele sephromoshini.
Uma kungekho nolunye lwezingcezu ezithintekile olungasuswa noma lubanjwe, umdlali angenza noma yikuphi ukunyakaza okusemthethweni.
Lapho ucezu luwela endlini, ngenxa yokuhamba okungokomthetho noma ingxenye yokunyakaza okusemthethweni, alunakususwa luyiswe kwenye indlu kulokhu kuhamba. Ukunyakaza kubhekwa njengokuqediwe:
esimweni sokubanjwa, lapho ucezu oluthathiwe lususiwe ebhodini futhi umdlali, ngemuva kokubeka ucezu lwakhe esigcawini esisha, ukhiphe ucezu oluthathiwe esandleni sakhe;
esimweni sokuphosa, lapho umdlali ekhiphe i-rook esandleni sakhe esigcawini esake sawela ngaphambili yinkosi. Lapho umdlali esededele inkosi esandleni, leso sinyathelo ngeke sisetshenziswe, kepha umdlali akasenalo ilungelo lokuhamba ngaphandle kwenqaba kulolo phiko, uma lokhu kusemthethweni;
esimweni sokukhuthazwa kwesikhonkwane, lapho isibambiso sesisusiwe ebhodini futhi isandla somdlali sikhiphe isiqeshana esisha ngemuva kokukubeka esigcawini sephromoshini. Uma umdlali esevele ekhiphile isibambiso esifike ebhokisini lokunyusa lesandla sakhe, lokho kuthutha akukenziwa, kepha umdlali akasenalo ilungelo lokudlala
abahamba ngezinyawo baye kwenye indlu.
Isilinganiso sithathwa njengesisemthethweni uma kuhlangatshezwana nazo zonke izidingo ezifanele ze-Article 3. Uma leso sinyathelo singekho emthethweni, kufanele kwenziwe esinye isinyathelo njengoba kushiwo ku-Article 4.5
4.7 Umdlali ulahlekelwa yilungelo lokukhononda ngokwephulwa kwendatshana 4 ngumphikisi, kusukela lapho ethinta ucezu ngamabomu.
5. Ukuphela kokuhamba
5.1 Umdlalo uzuzwa ngumdlali olawula inkosi yomphikisi. Lokhu kuqeda umdlalo ngokushesha, inqobo nje uma ukuhambisa okukhiqiza indawo yokubheka kusemthethweni.
Uma umdlalo uzuzwe ngumdlali umphikisi wakhe omemezele ukuthi uyahamba. Lokhu kuqeda ngokushesha umdlalo.
5.2 Umdlalo udlalwa lapho umdlali othatha ithuba engenazo izinyathelo zomthetho futhi inkosi yakhe ingekho ngaphansi kolawulo. Umdlalo kuthiwa ugcine ngokuthi inkosi "icwile." Lokhu kuqeda umdlalo ngokushesha inqobo nje uma ukuthutha okukhiqize indawo yetafula kusemthethweni.
umdlalo udonswa lapho kuvela isikhundla lapho kungekho mdlali angahlola inkosi yomphikisi ngochungechunge lwezinyathelo zomthetho. Umdlalo kuthiwa uphele "endaweni efile." Lokhu kuqeda umdlalo ngokushesha inqobo nje uma isinyathelo esikhiqiza isikhundla sisemthethweni (bheka i-Article 9.6)
Umdlalo wenzeka ngokuvumelana phakathi kwabadlali ngesikhathi somdlalo. Lokhu kuqeda ngokushesha umdlalo. (Bheka i-Article 9.1)
Umdlalo ungadonswa uma kuvela indawo efanayo noma ivele ebhodini okungenani kathathu. (Bheka i-Article 9.2)
Umdlalo ungadonswa uma abadlali benze iminyakazo yabo yokugcina engama-50 ilandelana ngaphandle kokuhambisa noma yimaphi ama-pawns futhi nangaphandle kokuthwebula. (Bheka iNdatshana 9.3)
6. Iwashi le-Chess
6.1. 'Iwashi le-Chess' lisho iwashi elinezingqapheli ezimbili, ezixhunywe ngendlela yokuthi munye kuphela wazo ongasebenza ngasikhathi sinye.
'Iwashi' eMithethweni ye-Chess lisho esinye seziqaphi zesikhathi ezimbili. Iwashi ngalinye linomcibisholo.
'Ukudonswa komcibisholo' kusho ukuphela kwesikhathi esabelwe umdlali.
6.2. Lapho usebenzisa iwashi le-chess, umdlali ngamunye kufanele enze inani eliphansi lokuhamba noma konke ukuhamba esikhathini esinikeziwe futhi / noma inani elingeziwe lesikhathi lingabiwa ngemuva kokuhamba ngakunye. Konke lokhu kumele kucaciswe kusenesikhathi.
Isikhathi esigciniwe ngumdlali ngesikhathi esisodwa siyangezwa esikhathini sesikhathi esilandelayo, ngaphandle kwemodi "yokubambezeleka kwesikhathi".
Kumodi ye "ukubambezeleka kwesikhathi", Bobabili laba badlali banikezwa 'isikhathi esikhulu' sokubonisa. Umdlali ngamunye futhi uthola "isikhathi esinqunyiwe esingeziwe" ngokuhamba ngakunye. Ukubalwa kwesikhathi okuyinhloko kuqala kuphela ngemuva kokuphela kwesikhathi esibekiwe. Inqobo nje uma umdlali eyeka iwashi lakhe ngaphambi kokuthi kuphele "isikhathi esimisiwe", "isikhathi esiyinhloko" asishintshi, kungakhathalekile ukuthi "isikhathi esinqunyiwe" sisetshenzisiwe
6.3 Ngokushesha ngemuva kokuwa komcibisholo, izidingo ze-Article 6.2 kufanele ziqinisekiswe.
6.4 Ngaphambi kokuqala komdlalo, kukunompempe ukunquma ukuthi ubekwa kuphi iwashi.
6.5 Iwashi lesidlali esinezicucu ezimhlophe kufanele liqale ngesikhathi esinqunyelwe ukuqala komdlalo.
6.6 Noma yimuphi umdlali ofinyelela ebhodini ngemuva kokuqala kweseshini uzolahlekelwa ngumdlalo. Ngakho-ke, isikhathi se-lag yimizuzu engu-zero. Imithetho yokuncintisana ingacacisa ngenye indlela.
Uma imithetho yomncintiswano icacisa isikhathi esihlukile sokungabikho, kuzosebenza okulandelayo:
Uma kungekho mdlali ofike ngesikhathi sokuqala, umdlali ophethe izingcezu ezimhlophe kufanele alahle sonke isikhathi esidlulile ngaphambi kokufika kwakhe, ngaphandle kwalapho imithetho yomncintiswano icacisa noma unompempe ethatha isinqumo ngenye indlela.
6.7 Ngesikhathi somdlalo, umdlali ngamunye, ngemuva kokuhamba ebhodini, kufanele ayeke iwashi lakhe aqale iwashi lomphikisi wakhe. Umdlali kufanele ngaso sonke isikhathi avunyelwe ukusebenzisa iphini ewashini lakhe. Ukuhamba kwakho kuthathwa njengokuqediwe kuze kube yilapho usukwenzile, ngaphandle kwalapho ukuhambisa kuphelisa umdlalo (bheka Imibhalo 5.1.a, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c kanye no-9.6).
Isikhathi phakathi kokuhamba ebhodini nokumisa iwashi uqobo, kanye nokuqala iwashi lomphikisi, sithathwa njengengxenye yesikhathi esinikezwe umdlali.
Umdlali kufanele ayeke iwashi lakhe ngesandla esifanayo enza ngaso ukuhambisa kwakhe. Ukugcina isandla sakho kuphini lokubuka noma ukuntweza phezu kwawo akuvunyelwe.
Abadlali kufanele baphathe kahle iwashi le-chess Akuvunyelwe ukuyisebenzisa ngamandla amaningi, ukuyibamba noma ukuyilahla. Ukusetshenziswa ngendlela engafanele kwewashi kuzojeziswa ngokuya nge-Article 13.4.
Uma umdlali engakwazi ukusebenzisa iwashi, kufanele ahlinzeke umsizi ukwenza lo msebenzi, ngokuxhaswa ngunompempe. Iwashi lakho kufanele lisethwe kahle ngunompempe ngendlela efanelekile.
Umcibisholo uthathwa njengowile lapho unompempe ebona iqiniso noma lapho omunye wabadlali enze isimangalo esifanele ngakho.
Ngaphandle kwalapho kuhlinzekwa okunye kokuqukethwe ku-Articles 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c, umdlali olahlekelwa yinombolo ebekiwe yokuhamba ngesikhathi uzolahlekelwa ngumdlalo. Kodwa-ke, umdlalo uyadonselwa lapho kufinyelelwa isikhundla lapho umphikisi engakwazi ukuhlola inkosi yomphikisi ngochungechunge lwezinyathelo ezingokomthetho.
I-. Noma isiphi isibonakaliso esinikezwe amawashi sizothathwa njengesiphetho ngokungabikho kwanoma yikuphi ukukhubazeka okusobala. Noma yiliphi iwashi le-chess elinezici ezisobala kufanele lithathelwe indawo. Unompempe kufanele angene esikhundleni sewashi futhi asebenzise ingqondo lapho ebeka izikhathi ezizokhonjiswa ngezandla zewashi ezizongena esikhundleni saleso esingalungile.
YEBO. Uma ngesikhathi somdlalo kutholakala ukuthi ukusethwa kwewashi elilodwa noma womabili bekungalungile, umdlali noma usompempe kufanele amise amawashi ngokushesha. Unompempe kufanele alungise izikhathi zokudubula nekhawunda lokudubula. Unompempe kufanele asebenzise ukwahlulela kwakhe okuhle ukuthola umthethonqubo ofanele.
6.8 Uma yomibili imicibisholo iwe futhi akunakwenzeka ukunquma ukuthi iyiphi ewele kuqala:
umdlalo uzoqhubeka uma lokhu kwenzeka kunoma iyiphi inkathi yomdlalo, ngaphandle kwesikhathi sokugcina.
umdlalo udonselwa uma kwenzeka ngesikhathi somdlalo, lapho konke ukunyakaza okusele kufanele kuqedwe.
6.9 Uma umdlalo udinga ukumiswa, unompempe kufanele amise amawashi.
Umdlali angamisa kuphela amawashi ukuze afune usizo lukanompempe, ngokwesibonelo lapho ukukhushulwa kwenzeka kanti isiqeshana esidingekayo asitholakali.
Unompempe kufanele anqume ukuthi umdlalo kufanele uqalwe nini kunoma yikuphi.
Uma umdlali emisa amawashi efuna usizo kunompempe, unompempe kufanele anqume ukuthi ngabe umdlali unaso yini isizathu esizwakalayo sokwenza lokho. Uma kusobala ukuthi besingekho isizathu esizwakalayo sokumisa amawashi, umdlali uzojeziswa ngokuya nge-athikili 13.4
6.10 Uma kwenzeka iphutha kwenzeka futhi / noma izingcezu kufanele zishintshwe endaweni edlule, unompempe kufanele asebenzise isinqumo sakhe esingcono kakhulu ukunquma izikhathi ezitholakala ngamawashi. Unompempe kufanele futhi, uma kunesidingo, alungise inani lokunyakaza emuva.
6.11 Egumbini lomdlalo: izikrini, abaqaphi noma amabhodi odonga avunyelwe, akhombisa indawo yamanje yebhodi, ukunyakaza nenombolo yokunyakaza okwenziwe, namawashi akhombisa nenombolo yokuhamba. Kodwa-ke, umdlali akakwazi ukwenza noma yiziphi izimangalo ngokuya ngemininingwane eboniswe ngale ndlela.
7. Ukungahambi kahle
7.1 Uma ngesikhathi somdlalo kutholakala ukuthi ukuma kokuqala kwezingcezu bekungalungile, umdlalo uzokhanselwa bese kudlalwa umdlalo omusha.
Uma, ngesikhathi somdlalo, kubonakala sengathi ibhodi libekwe ngokungafani nemibandela ye-Article 2.1, ukudlala kuyaqhubeka, kodwa isikhundla esivele sidlalwe kufanele sidluliselwe ebhodini elibekwe kahle.
7.2 Uma umdlalo uqalile ngemibala ehlehlisiwe, kufanele iqhubeke ngaphandle kokuthi unompempe anqume ngenye indlela.
Uma umdlali ehambisa isicucu esisodwa noma eziningi, kufanele abuyisele indawo efanele ngesikhathi sakhe. Uma kunesidingo, umdlali noma umphikisi angamisa isikhathi abize umphenyi. Unompempe angajezisa umdlali osuse izingcezu.
7.3 Uma, ngesikhathi somdlalo, kutholakala ukuthi isenzo esingekho emthethweni sesiphothuliwe, kufaka phakathi ukwehluleka emkhosini wokwenyusa i-pawn noma ukubamba inkosi yalowo ophikisana naye, isikhundla esandulela ukungahambi kahle kufanele sakhiwe kabusha. Uma leso sikhundla singenakuphinda sakhiwe, ukudlala kufanele kuqhubeke kusuka endaweni yokugcina engakhonjwa, ngaphambi kwesiphambeko. Amawashi kufanele asethwe ngokuya nge-Article 6.13. Imibhalo 4.3 kanye no-4.6 isebenza ekunyakazeni okwenzeka esikhundleni sokunyakaza okungekho emthethweni. Ukudlala kufanele kuqhubeke kusuka endaweni ebuyiselwe.
Uma ngemuva kokuthatha izinyathelo ezichazwe ku-Article 7.4.a, ngezinyathelo ezimbili zokuqala ezingekho emthethweni ezenziwa ngumdlali, umphenyi kufanele anikeze umphikisi imizuzu eyengeziwe emibili esimweni ngasinye; ngokunyakaza okungekho emthethweni kwalo mdlali ofanayo, unompempe kufanele amemezele ukuthi umdlalo ulahlekelwe yilowo mdlali.
Kodwa-ke, umdlalo uyadonselwa lapho kufinyelelwa isikhundla lapho umphikisi engakwazi ukubheka inkosi yomphikisi ngochungechunge lwezinyathelo ezingokomthetho.
7.4 Uma, ngesikhathi somdlalo, izingcezu zitholakale zisukile emakhaya abo, isikhundla masinyane ngaphambi kokungajwayelekile kufanele sibuyiselwe. Uma isikhundla esandulele ukungahleleki singeke sanqunywa, umdlalo uzoqhubeka usuka endaweni engakhonjwa yokugcina ngaphambi kokungajwayelekile. Amawashi kufanele asethwe ngokuya nge-Article 6.13. Ukudlala kufanele kuqhubeke kusuka endaweni ebuyiselwe.
8. Isichasiselo seminikelo
8.1 Ngesikhathi somdlalo, umdlali ngamunye kudingeka abhale 'kuspredishithi' esinqunyelwe umncintiswano, nge-algebraic notation (Bheka iSithasiselo C), ukunyakaza kwakhe kanye nokwalabo abaphikisana nabo, ngendlela efanele, ukuhambisa ukunyakaza, ngendlela icace futhi ifundeke kalula ngangokunokwenzeka. Akuvunyelwe ukubhala phansi i-rally ngaphambi kokuyifaka ebhodini lamaphuzu, ngaphandle kwalapho kufunwa uthayi ngaphansi kwe-Article 9.2, 9.3, noma umdlalo uhlehliswa ngokuya nge-Article 1.a. Yemihlahlandlela Yokuhamba Ehlehlisiwe.
Umdlali angaphendula esinyathelweni somphikisi ngaphambi kokubhala, uma efisa.
Kufanele ubhale okunikezwayo kwakho kwangaphambili ngaphambi kokwenza okunye
Bobabili laba badlali kufanele bafake isicelo sokudonswa kuspredishithi (Bheka iSithasiselo C.13).
Uma umdlali engakwazi ukuthola amaphuzu, umsizi, onganikezwa ngumdlali futhi amukelwe ngunompempe, uzokwenza lokho. Iwashi lakhe kufanele lisethwe kahle ngunompempe.
8.2 Ngesikhathi somdlalo, ispredishithi kufanele sihlale sibonakala kunompempe.
8.3 Amaspredishithi ayimpahla yabahleli bomcimbi.
8.4 Uma umdlali enemizuzu engaphansi kwemihlanu ewashini lakhe nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi somdlalo futhi engatholi isikhathi esingeziwe semizuzwana engama-30 noma ngaphezulu ngemuva kokuhamba ngakunye, ngesikhathi esisele sesikhathi akavunyelwe ukuhlangabezana nezidingo zomdlalo. Isigaba 8.1. Masinyane ngemuva kokuwa komunye 'wemicibisholo', umdlali kufanele abuyekeze ishidi lakhe ngaphambi kokuhambisa ucezu ebhodini.
8.5 Uma kungadingeki mdlali ukuthola amaphuzu, ngokuya nge-Article 8.4, umpempe noma umsizi kumele azame ukufakaza futhi aqophe ukunyakaza. Kulokhu, ngokushesha ngemuva kokuwa komcibisholo, unompempe kufanele amise amawashi. Ngemuva kwalokho bobabili abadlali kufanele bavuselele amashidi abo, kusetshenziswa onompempe noma abaphikisi.
Uma kudingeka umdlali oyedwa kuphela ukuba aqophe, ngokuya ngemibandela ye-Article 8.4, ngokushesha nje lapho omunye wemicibisholo uwa, kufanele abuyekeze iphepha lakhe lokusebenzela ngaphambi kokuhambisa ucezu ebhodini. Uma nje kuyithuba lakho lokuhamba, umdlali angasebenzisa ispredishithi somphikisi, kepha kufanele asibuyise ngaphambi kokuhamba.
Uma ispredishithi esiphelele singatholakali, abadlali kumele bakhe umdlalo kabusha kwelinye ibhodi, ngaphansi kweso likanompempe noma umsizi. Ngaphambi kokuqala kokwakhiwa kabusha komdlalo, unompempe uzoqopha ukuma kwamanje komdlalo, izikhathi kanye nenombolo yeminyakazo eyenziwe, uma lolu lwazi lutholakala.
Uma amaspredishithi aphelelwe yisikhathi futhi ekhombisa ukuthi umdlali weqe umkhawulo wesikhathi, isinyathelo esilandelayo kufanele sithathwe njengesokuqala sesikhathi esilandelayo, ngaphandle kwalapho kunobufakazi bokuthi kuningi okwenziwayo okwenziwe.
Ngemuva komdlalo, bobabili abadlali kumele basayine womabili amaphepha okusebenzela, okukhombisa umphumela womdlalo. Noma kungalungile, lo mphumela umile, ngaphandle kokuthi umpempe anqume ngenye indlela.
9. Imidlalo eboshiwe
9.1 Imithetho yokuncintisana ingacacisa ukuthi abadlali abakwazi ukuvuma ukubopha ngaphansi kwenani elithile lokunyakaza noma nganoma iyiphi indlela, ngaphandle kwemvume kanompempe.
9.2 Uma imithetho yomncintiswano ivumela ukudweba okuvunyelwene ngakho, kuzosebenza okulandelayo:
Umdlali ofuna ukuphakamisa i-toss kumele akwenze ngemuva kokwenza ukunyakaza ebhodini, ngaphambi kokumisa iwashi nokuqala iwashi lomphikisi. Ukunikezwa nganoma yisiphi esinye isikhathi ngesikhathi somdlalo kuhlala kusebenza, kepha i-Article 12.6 kufanele ibhekwe. Imibandela ayinakufakwa esiphakamisweni. Kuzona zozimbili lezi zinhlinzeko, isithembiso asikwazi ukuhoxiswa futhi sihlale sisebenza kuze kube yilapho umphikisi esamukela, esenqaba ngomlomo, esenqaba ngokuthinta ucezu ngenhloso yokuluhambisa noma ukulufaka, noma uma umdlalo uphela ngenye indlela.
Ukunikezwa komdwebo kufanele kuphawulwe ngabadlali ababili kumaspredishithi abo abanophawu (Bheka Isithasiselo C13).
Isimangalo sokudonswa esisuselwa ku-Articles 9.2, 9.3 noma 10.2 sizothathwa njengesipho sokudonswa.
9.2 Umdlalo udonswa, ngemuva kwesikhalazo esifanele esivela kumdlali onethuba lokudlala, lapho esesikhundleni esifanayo, okungenani kathathu (hhayi ngokuphindaphinda ukunyakaza)
sekuzovela, uma uqala ukubhala ukuhambisa kwakho kuspredishithi bese umemezela kunompempe inhloso yakho yokwenza lokho, noma
usanda kubonakala futhi umdlali othi uthayi unethuba lokudlala.
Izikhundla ngokusho kuka (a) no (b) zibhekwa ziyefana, uma umdlali ofanayo enethuba, izingcezu zohlobo olufanayo nombala zihlala ezikweleni ezifanayo, namathuba okuhamba azo zonke izingcezu zabadlali ababili okufanayo.
Izikhundla azifani uma i-pawn ebingabanjwa 'en passant' ingasakwazi ukubanjwa ngale ndlela. Lapho inkosi (noma i-rook) iphoqeleka ukuthi ihambe, ilahlekelwa yilungelo layo lokusakaza, uma likhona, kuphela ngemuva kokuhanjiswa.
9.3. Umdlalo uboshiwe, ngenxa yesikhalazo esifanele somdlali onethuba lokudlala, uma:
uqopha ukuhamba kwakhe ekhasini lakhe lokusebenzela futhi umemezela kunompempe inhloso yakhe yokwenza isenzo sakhe, okuzoholela ezinyakazweni ezingama-50 ezenziwe kumdlali ngamunye ngaphandle kokunyakaziswa kwanoma iyiphi i-pawn futhi ngaphandle kokubanjwa, noma
Izinyathelo zokugcina ezingama-50 ezilandelanayo zenziwe yibo bobabili abadlali, ngaphandle kokunyakaza kwe-pawn noma ukubanjwa.
Uma umdlali ethinta ucezu ngokuya nge-Article 4.3 ngaphandle kokufuna uthayi, ulahlekelwa yilungelo lokufuna, ngokusho kweNdatshana 9.2 no-9.3, kuleso sinyathelo.
Uma umdlali ebanga uthayi, ngokwe-Article 9.2 no-9.3, angawamisa womabili amawashi. (Bheka i-Article 6.12.b) Awukwazi ukuhoxisa isimangalo
Uma isimangalo sizimisele ukuthi silungile, umdlalo udonswa ngokushesha
Uma isimangalo sinqunywa ukuthi asilona iqiniso, unompempe kufanele engeze imizuzu emithathu esikhathini esisele sokukhombisa somphikisi. Ngemuva kwalokho umdlalo kufanele uqhubeke. Uma isicelo senziwe ngesisekelo sokunikezwa okuhleliwe, lokhu kunikezwa kufanele kwenziwe ngokuya ngemibandela ye-Article 4.
9.4 Umdlalo udonswa lapho kufinyelelwa isikhundla lapho ukubhekwa kungenzeki khona ngenxa yochungechunge lwezinyathelo zomthetho. Lokhu kuqeda umdlalo ngokushesha inqobo nje uma ukuhambisa okukhiqiza lesi sikhundla kusemthethweni.
10. Isiphetho esisheshisiwe
10.1 'Ukuphela kokuqhamuka' yisigaba somdlalo lapho konke (okusele) kuhamba kufanele kwenziwe ngaphakathi komkhawulo wesikhathi othize.
10.2 Uma umdlali, ithuba lokudlala, enemizuzu engaphansi kwemibili ewashini lakhe, angafuna ukudonsa ngaphambi kokuwa komcibisholo wakhe. Kufanele abize unompempe futhi angavimba amawashi (Bheka i-Article 6.12.b).
Uma unompempe emukela ukuthi umphikisi akenzi umzamo wokuwina umdlalo, ngendlela ejwayelekile, noma ukuthi umphikisi akakwazi ukuwina ngendlela ejwayelekile, kuzofanele amemezele uthayi. Ngaphandle kwalokho, kufanele uhlehlise isinqumo sakho noma unqabe isikhalazo. Uma unompempe ehlehlisa isinqumo sakhe, umphikisi angavunyelwa imizuzu emibili yesikhathi esengeziwe futhi umdlalo kufanele uqhubeke uma kunokwenzeka kukhona unompempe. Unompempe kufanele amemezele umphumela wokugcina ngemuva komdlalo noma ngokushesha ngangokunokwenzeka ngemuva kokuthi umcibisholo ufikile. Kufanele umemezele uthayi uma wamukela ukuthi indawo yokugcina ayinakunqotshwa ngezindlela ezijwayelekile, noma ukuthi umphikisi ubengazami ngokwanele ukuwina umdlalo ngezindlela ezijwayelekile.
Uma umpempe enqaba isimangalo, umphikisi kufanele abe nemizuzu emibili yesikhathi esengeziwe.
Isinqumo somlamuli sizoba sesokugcina (ngaphandle kwesikhalazo) sika (a), (b), (c).
11. Ngaphandle kokuthi kumenyezelwe phambilini, uma kungenjalo, umdlali onqoba umdlalo wabo, noma onqoba i-WO, uthola iphuzu (1), umdlali olahlekelwa ngumdlalo wakhe noma ohlulwa yi-WO uthola (0) pt nomdlali ngubani tie umdlalo wakho uthola amaphuzu uhhafu wephuzu (½).
12. Ukuziphatha kwabadlali.
12. 1 Abadlali kungenzeka bangathathi isenzo esidala idumela elibi emdlalweni we-chess.
2 Abadlali abanakushiya “indawo yokudlala” ngaphandle kwemvume kanompempe. Indawo yemidlalo iqukethe igumbi lomdlalo, izindlu zangasese, indawo elula yokudla, indawo ebekelwe ababhemayo nezinye izindawo eziqokwe ngunompempe. Umdlali, onethuba lokudlala, akakwazi ukuphuma ehholo lokudlala ngaphandle kwemvume kanompempe.
12.2 Ngesikhathi somdlalo, abadlali abavunyelwe ukusebenzisa amanothi, imithombo yolwazi noma iseluleko, noma ukuhlaziya kwelinye ibhodi.
Ngaphandle kwemvume kanompempe, umdlali unqatshelwe ukuphatha iselula noma ezinye izindlela zokuxhumana ngogesi egumbini lomdlalo, ngaphandle kokuthi unqanyulwe ngokuphelele. Uma enye yalezi zinsiza ikhiqiza umsindo, umdlali kufanele alahlekelwe ngumdlalo. Umphikisi kumele anqobe. Kodwa-ke, uma umphikisi engakwazi ukuwina umdlalo ngochungechunge lwezinyathelo zomthetho, amaphuzu akhe kufanele athathwe njengothayi.
Ukubhema kuvunyelwe kuphela endaweni enqunywe ngunompempe.
Ispredishithi kufanele sisetshenziselwe kuphela ukurekhoda amabhidi, izikhathi zewashi, ibhidi yothayi, amarekhodi ahlobene nezikhalazo, nenye idatha efanelekile.
Abadlali abaqedile imidlalo yabo kufanele bathathwe njengezibukeli.
Akuvunyelwe ukuphazamisa noma ukuphazamisa ophikisayo nganoma iyiphi indlela. Lokhu kufaka phakathi izikhalazo ezingenangqondo, ukunikezwa kwe-sweepstakes okungenakuqhathaniswa, noma ukwethulwa komthombo womsindo endaweni yokudlala.
Ukwephulwa kwanoma iyiphi ingxenye yendatshana engu-12.1 kuye ku-12.6 kuzodala ukuthi kusetshenziswe unswinyo olunikezwe ku-athikili 13.4.
12.3 Ukwenqaba okuqhubekayo komdlali ukuhambisana neMithetho ye-Chess kufanele kujeziswe ngokulahlekelwa ngumdlalo. Unompempe kufanele anqume amaphuzu omphikisi.
Uma bobabili laba badlali betholakala benecala ngaphansi kwe-Article 12.8, umdlalo uzomenyezelwa njengolahlekile kubo bobabili.
Endabeni yobuciko. 10.2.d. noma Isithasiselo D, umdlali akakwazi ukuphikisa isinqumo sompempe.
Kunoma ikuphi okunye, umdlali angafaka isikhalazo nganoma yisiphi isinqumo sikanompempe, ngaphandle uma imithetho yomncintiswano icacisa ngenye indlela.
13. Indima kanompempe
13.1 Unompempe kufanele aqinisekise ukuthi iMithetho ye-Chess iyagcinwa ngokuqinile.
Unompempe kufanele asebenze ngendlela ezosiza umncintiswano. Kumele uqinisekise ukuthi kunendawo enhle yokudlala, ukuze abadlali bangaphazanyiswa. Kumele futhi ubheke ukusebenza kahle komncintiswano.
Unompempe kufanele abheke imidlalo, ikakhulukazi uma abadlali befika ngesikhathi, aqinisekise izinqumo azithathile, futhi abeke nezinhlawulo kubadlali lapho kufanele khona.
13.2 Unompempe angafaka inhlawulo eyodwa noma ngaphezulu kulezi ezilandelayo:
ukwandisa isikhathi somphikisi esisele,
ukunciphisa isikhathi esisele somdlali owonile,
memezela ukuthi umdlalo ulahlekile,
ukunciphisa amaphuzu atholwe emdlalweni ngumdlali owonile,
khulisa amaphuzu atholwe kumdlalo ngumphikisi afike kokungaphezulu kakhulu kwalowo mdlalo,
Unompempe anganikeza umdlali oyedwa noma bobabili isikhathi esengeziwe uma kwenzeka kuba nokuphazamiseka kwangaphandle ngesikhathi somdlalo.
Unompempe akufanele angenelele emdlalweni, ngaphandle kwamacala ahlinzekelwe eMithethweni ye
Chess. Akufanele ikhombise inani lokunyakaza okwenziwe, ngaphandle kwalapho kufakwa izinhlinzeko ze-Article 8.5, lapho okungenani umcibisholo owodwa uwile. Unompempe kufanele ayeke ukwazisa umdlali ukuthi imbangi yakhe ithathe isinyathelo noma ukuthi umdlali akaqalanga iwashi lakhe.
I-. Izibukeli nabadlali beminye imidlalo akumele bakhulume noma baphazamise umdlalo nganoma iyiphi indlela. Uma kunesidingo, umpempe angaxosha abaphula umthetho endaweni yokudlala. Uma othile ebona okungahambi kahle, bangamazisa unompempe kuphela.
YEBO. Ngaphandle kokuthi kugunyazwe ngunompempe, akuvunyelwe ukuthi noma ngubani asebenzise umakhalekhukhwini noma enye into yokuxhumana kuleyo ndawo nakunoma iyiphi enye indawo enqunywe ngunompempe.
14.1 Izinhlangano ezihlanganisiwe zingacela i-FIDE ukuthi inikeze isinqumo esisemthethweni ezindabeni ezihlobene neMithetho ye-Chess.
A. I-chess esheshayo
A1 Umdlalo 'we-Quick Chess' ungomunye lapho konke ukunyakaza kufanele kwenziwe ngaphakathi kwesikhathi esinqunyelwe okungenani semizuzu eyi-15, kepha ngaphansi kwemizuzu engama-60 kumdlali ngamunye; noma isikhathi esikhulu + izikhathi ezingama-60 noma yikuphi ukukhushulwa okungenani imizuzu eyi-15, kepha ingaphansi kwemizuzu engama-60 kumdlali ngamunye.
A2 Abadlali abadingeki ukurekhoda ukunyakaza komdlalo.
A3 Uma kukhona ukugadwa okwanele komdlalo (ngokwesibonelo, unompempe oyedwa wokulingana kwemithathu) iMithetho Yezokuncintisana iyasebenza.
A4 Lapho ukugadwa kunganele, Imithetho Yezokuncintisana iyasebenza, ngaphandle kwalapho ilawulwa Yimithetho elandelayo ye-Rapid Chess:
Lapho umdlali ngamunye esenze iminyakazo emithathu, akukho zikhalazo ezingenziwa maqondana nokubekwa okungalungile kwezingcezu, ukuma kwebhodi, noma ukumiswa kwewashi. Uma kwenzeka kushintshwa isikhundla phakathi kwenkosi nendlovukazi, akuvumelekile ukuphonsa nale nkosi.
Unompempe kufanele angenelele ngokuya ngezinhlinzeko zoBuciko. 4 (Umthetho wokuhambisa izingcezu), kuphela uma kudingeka umdlali oyedwa noma bobabili.
Ukunyakaza okungekho emthethweni kuyaphothulwa ngokushesha lapho iwashi lomphikisi liqala. Umphikisi unelungelo lokufuna ukuthi umdlali uqede isenzo esingekho emthethweni, inqobo nje uma engakwenzanga lokho. Kuphela ngemuva kwesikhalazo esinjalo lapho unompempe engenelela. Kodwa-ke, uma womabili amakhosi engaphansi kolawulo noma ukukhushulwa kwesibambiso kungakaqedwa, unompempe kufanele angenelele, uma kungenzeka.
1. Umcibisholo uthathwa njengowa lapho omunye wabadlali enza isimangalo esivumelekile. Unompempe kufanele ayeke ukukhomba umcibisholo owayo, kepha angangenelela uma yomibili imicibisholo iwa.
A5 Ukufuna ukunqoba isikhathi, ummangali kufanele amise womabili amawashi futhi azise onompempe.
Ukuze isimangalo siphumelele, ngemuva kokuthi kumiswe amawashi, umcibisholo wommangali kufanele ube 'phezulu' bese umcibisholo womphikisi wakhe ubheke phansi ngemuva kokuthi amawashi emisiwe.
A6 Uma yomibili imicibisholo ikhishwe njengoba kuchaziwe ku- (1) naku- (2), unompempe kufanele amemezele ukuthi umdlalo uthayi.
B1 Umdlalo 'wombani' ungomunye lapho konke ukunyakaza kufanele kwenziwe ngaphakathi kwesikhathi esibekiwe esingaphansi kwemizuzu engu-15 kumdlali ngamunye; noma isikhathi esikhulu + izikhathi ezingama-60 noma yikuphi ukukhushulwa kungaphansi kwemizuzu engu-15.
B2 Uma kukhona ukugadwa okwanele komdlalo (unompempe oyedwa kumdlalo ngamunye), kusebenza Imithetho Yezokuncintisana kanye nezinhlinzeko ze-Article A2.
B3 Lapho ukugadwa kunganele, okulandelayo kufanele kusebenze.
Imidlalo izolawulwa yi-Laws of Rapid Chess njengoba inikezwe kuSithasiselo A, ngaphandle kwalapho ilawulwa Yimithetho Yombane elandelayo.
Izindatshana 10.2 no-A4c azisebenzi.
Ukunyakaza okungekho emthethweni kuyaphothulwa ngokushesha lapho iwashi lomphikisi liqala. Ngaphambi kokwenza isinyathelo sakhe, umphikisi unelungelo lokufuna ukunqoba. Kodwa-ke, umdlali unelungelo lokufuna ukudonsa ngaphambi kokwenza isenzo sakhe, uma umphikisi engakwazi ukusilawula ngenxa yochungechunge lwezinyathelo ezingokomthetho. Ngemuva kokuthi umphikisi eseqedile ukuhambisa kwakhe, isenzo esingekho emthethweni ngeke silungiswe ngaphandle kokuthi kube nesivumelwano esifanayo ngaphandle kokungenelela kukanompempe.
Incazelo yohlelo lwe-algebraic
C1 Kule ncazelo, "ucezu" lisho noma yini, ngaphandle kwephawundi.
C2 Ucezu ngalunye lukhonjiswa ngohlamvu olukhulu lokuqala lwegama lalo. Isibonelo: R = inkosi, D = indlovukazi, T = rook, B = umbhishobhi, C = knight. (Endabeni yehhashi, ukuze kube lula, sebenzisa uN.)
C3 Ohlamvwini lokuqala lwegama lezingcezu, umdlali ukhululekile ukusebenzisa uhlamvu lokuqala lwegama njengoba livame ukusetshenziswa ezweni lakhe. Isibonelo: F = fou (French for bishop), L = loper (Dutch for bishop). Kumamagazini aphrintiwe, kunconywa ukusetshenziswa kwemvunulo.
Izinja C4 Abakhonjiswa ngencwadi yabo yokuqala, kepha babonwa ngokungabikho kwabo. Isibonelo: e5, d4, a5.
C5 Amakholomu ayisishiyagalombili (kwesobunxele kuye kwesokudla okumhlophe nasesandleni sokudla kwesimnyama) akhonjiswa ngezinhlamvu ezincane, a, b, c, d, e, f, g, no-h, ngokulandelana.
C6 Imigqa eyisishiyagalombili (kusuka phansi kuye phezulu kumdlali omhlophe nokusuka phezulu kuye phansi kumdlali omnyama) ibalwa ngo-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no-8, ngokulandelana. Ngenxa yalokho, endaweni yokuqala, izingcezu ezimhlophe zifakwa emgqeni wokuqala nowesibili; Izingcezu ezimnyama zifakwa emgqeni wesishiyagalombili nowesikhombisa.
C7 Njengomphumela wale mithetho engenhla, ibhokisi ngalinye kulawa angama-64 likhonjiswa ngokungaguquguquki ngenhlanganisela eyodwa yencwadi enenombolo
C8 Ukuhamba ngakunye kocezu kuboniswa a) uhlamvu lokuqala lwegama locezu okukhulunywa ngalo kanye b) nendawo yokufika. Akunadeshi phakathi kuka-a no-b).
Izibonelo: Be5, Nf3, Rd1.
Endabeni yabahamba ngezinyawo, kukhonjiswa kuphela indawo yokufika. Izibonelo: e5, d4, a5.
C9 Lapho ucezu lufakwa, i-x ifakwa phakathi (a) kohlamvu lokuqala negama locezu okukhulunywa ngalo kanye b) nendawo yokufika. Izibonelo: Bxe5, Nxf3, Rxd1. Lapho i-pawn yenza ukuthwebula, ikholomu yokuqala kufanele ikhonjiswe, bese kuba ngu-x, ekugcineni isikwele sokufika. Izibonelo: dxe5, gxf3, axb5. Endabeni yokubanjwa kwe- 'en passant', kunikezwa isikwele okubhekiswe kuso, okukhombisa ukuthi i-pawn ifike kuphi ekugcineni, futhi izinhlamvu u-'ep 'ziyangezwa esibhalweni. Isibonelo: exd6 ep
C10 Uma amathayili amabili afanayo engaya esikweleni esifanayo, ithayela elihambayo likhonjiswa ngokulandelayo:
Uma zombili izingcezu zikulayini owodwa: a) uhlamvu lokuqala lwegama locezu, b) ikholomu yendawo osuka kuyo, kanye c) nendawo yokufika.
Uma izingcezu ezimbili zikukholamu efanayo: ngu-a) uhlamvu lokuqala lwegama locezu, b) umugqa wendawo lapho usuka khona, kanye c) nendawo yokufika
Uma izingcezu zikumakholamu ahlukahlukene nasemigqeni, indlela 1) iyathandeka. Endabeni yokubamba, i-'x 'ingangezwa phakathi kuka-b) no-c).
Kunama-knights amabili, ezigcawini g1 naku-e1, kanti enye yazo iya esikweleni f3: Ngf3 noma Nef3, njengoba kungaba njalo.
Kunama-knights amabili, kuzikwele ze-g5 kanye ne-g1, kanti enye yazo iya esikweleni se-f3: C5f3 noma C1f3, njengoba kungaba njalo.
Kukhona ama-knights amabili, endlini h2 no-d4, kanti enye yazo iya endlini f3: Nf3 noma Ndf3, njengoba kungaba njalo.
Uma ukubamba kwenzeka kuhlaka f3, izibonelo ezingenhla ziyashintshwa ngokungeza i-'x ':
1) Uma izidladla ezimbili zingabamba ucezu olufanayo nolomphikisi, i-pawn ehanjisiwe ikhonjiswa ngo-a) incwadi yekholamu yokuqala, b) i-'x ', c) isikwele sokugcina. Isibonelo: uma kunama-pawn amhlophe ezikwele c4 no-e4 nocezu omnyama ku-d5, umbono ngokuhamba kukaWhite ngu-cxd5 noma u-exd5, njengoba kufanele.
Endabeni yokuphakanyiswa kwezikhonkwane, ukuhanjiswa kwephawundi kuyakhonjiswa, kulandelwe ngokushesha incwadi yokuqala yocezu olusha. Izibonelo: d8D, f8C, b1B, g1T.
Ukunikezwa kukathayi kumele kumakwe njengo- (=)
0-0 = isikhunta ngombhoshongo h1 noma umbhoshongo h8 (idwala elincane)
0-0-0 = isikhunta ngombhoshongo a1 noma umbhoshongo a8
(idwala elikhulu) x = kubanjwa
+ = hlola ++ noma # = ukubheka
ep = bamba "ukudlula"
Akuphoqelekile ukubhala isheke, ukubheka kanye nokuthwebula kuspredishithi.
Umdlalo wamanqamu osheshisiwe engekho onompempe endaweni yomdlalo
Ezimweni lapho imidlalo ilawulwa yizinhlinzeko ze-Article 10, umdlali angafuna ukudonsa lapho enemizuzu engaphansi kwemibili ewashini lakhe nangaphambi kokuba umcibisholo wakhe uwe. Lokhu kuqeda umdlalo. Ungafaka isicelo ngokususelwa ku:
ukuthi isitha sakho ngeke siphumelele ngezindlela ezijwayelekile, kanye / noma
ukuthi isitha sakho asenzi mzamo wokuwina ngezindlela ezijwayelekile.
Ku-hypothesis (a), umdlali kufanele aqaphele indawo yokugcina bese umphikisi wakhe eyihlola.
Ku-hypothesis (b), umdlali kufanele aqophe indawo yokugcina kuspredishithi esibuyekeziwe.
Umphikisi kufanele aqinisekise kokubili isikhundla sokugcina kanye nephepha lokusebenzela.
Isikhalazo kufanele sidluliselwe kumlamuli, isinqumo sakhe esizoba ngesokugcina.
Imithetho yomdlalo enabantu abangaboni nababona kancane.
Abaqondisi bomqhudelwano we-E1 kufanele babe namandla okuguqula imithetho ebhalwe ngezansi ngokuya ngezimo zendawo.
Kumdlalo we-chess wokuncintisana phakathi kwabadlali ababonayo nabadlali abangaboni kahle (umdlali ongaboni kahle), noma yimuphi umdlali angafuna ukusetshenziswa kwamabhodi amabili, abadlali ababukayo abanebhodi elijwayelekile, kanye nomdlali ongaboni kahle onebhodi elakhiwe ngokukhethekile. Ideski elakhiwe ngokukhethekile kufanele lihlangabezane nalezi zidingo ezilandelayo:
ubukhulu obuncane 20 x 20 cm;
izindlu ezimnyama zakhululeka kancane;
imbobo encane endlini ngayinye;
Ucezu ngalunye kufanele lube nepini elincane elilingana kahle emgodini wezindlu;
Izingcezu zezimodeli ze "Staunton", izingcezu ezimnyama zimakwe ngokukhethekile.
E2 Le mithetho elandelayo kufanele ilawule umdlalo:
1. Okunikezwayo kufanele kumenyezelwe ngokucacile, kuphindwe ngumphikisi bese kwenziwa ebhodini lakhe. Lapho uphromotha i-pawn, umdlali kufanele amemezele ukuthi iyiphi ingxenye ekhethiwe. Ukwenza isimemezelo sicace ngangokunokwenzeka, kuphakanyiswa ukuthi kusetshenziswe
Amagama alandelayo esikhundleni sezinhlamvu ezihambisanayo ze-algebraic
Imigqa kusuka kokumhlophe kuye kokumnyama kufanele ibe nezinombolo ngesiJalimane:
8 acht (ayisishiyagalombili)
Kumenyezelwa lesi sigaxa "ULange Rochade”(IGrande Roque ngolimi lwesiJalimane) kanye ne-“ Kurze Rochade ”(Abalingisi abancane ngolimi lwesiJalimane).
Izingcezu zisebenzisa amagama olimi lwesiJalimane:
"Koenig ”(King),“ Dame ”(Queen),“ Turm ”(Rook),“ Laeufer ”(Bishop),“ Springer ”(Horse) kanye no“ Bauer ”(Pawn).
Ebhodini lomdlali ongaboni kahle, ucezu kubhekwe ukuthi luthintwe lapho selususiwe emgodini wokulungisa.
Ukunikezwa kubhekwa ukuthi kuzokwenziwa lapho:
esimweni sokubanjwa, uma ucezu oluthathiwe lususiwe ebhodini lomdlali ithuba lalo lokudlala;
ingxenye ibekwe emgodini wokulungisa ohlukile;
Kungaleso sikhathi kuphela lapho iwashi lomphikisi lizoqalwa khona.
Lapho nje amaphuzu 2 no-3 ngenhla efakiwe, imithetho ejwayelekile iyasebenza kumdlali wokubhula.
4. Ukusetshenziswa kwewashi elakhiwe ngokukhethekile lomdlali ongaboni kahle kuvunyelwe. Iwashi kufanele futhi libe nezici ezilandelayo:
ukudayela okulungiswe ngezandla eziqinisiwe, njalo ngemizuzu emihlanu kumakwe ichashazi futhi njalo ngemizuzu eyi-15 ngamachashazi amabili;
Umcibisholo ongazwakala kalula ngokuthinta. Ukunakekelwa okukhethekile kufanele kwenziwe ukuqinisekisa ukuthi imicibisholo ilungiswa kahle ukuze umdlali ezwe izandla imizuzu emihlanu yokugcina yehora eligcwele.
Umdlali ongaboni kahle kufanele aqophe umdlalo ngeBraille, noma abhale ukunyakaza ngesandla, noma akuqophe kutheyipu kazibuthe.
Noma yimaphi amaphutha esimemezelweni sokuhamba kufanele alungiswe ngokushesha ngaphambi kokuba iwashi lomphikisi liqale.
Uma phakathi nomdlalo kuvela izikhundla ezahlukahlukene emabhodini amabili, kufanele zilungiswe ngosizo lukanompempe futhi zithinte amaphepha okusebenzela alaba badlali ababili. Uma amakhasi okusebenzela amabili efanelana, umdlali obhale lesi sinyathelo ngendlela efanele, kodwa wasisebenzisa ngokungafanele, kufanele alungise isikhundla sakhe ukuze sihambisane nokuhamba okuboniswe kumashidi okusebenzela.
Uma kwenzeka kwehluka emashidini amabili okusebenzela, lesi sikhundla kufanele sakhiwe kabusha kuze kube sezingeni lapho amaphepha okusebenzela ahlangana khona futhi unompempe uzosetha kabusha amawashi ngokufanele uma kudingeka.
Umdlali ongaboni kahle uzoba nelungelo lokusebenzisa umsizi ozokwenza noma yiziphi izibopho ezilandelayo:
Yenza ukuhamba komdlali ngamunye ebhodini lomphikisi;
Memezela ukunyakaza kwabo bobabili abadlali;
Qopha ukunyakaza ekhasini lokusebenzela lomdlali ongaboni kahle bese uqala iwashi lomphikisi (kucatshangelwa umthetho 3.c);
yazisa umdlali ongaboni kahle, kuphela ngesicelo sakhe, inani lokunyakaza okwenziwe nesikhathi esichithwa ngabo bobabili abadlali;
funa ukunqoba uma iwashi lomphikisi liwile futhi wazise unompempe lapho umdlali wokuqagela ethinte enye yezingcezu zakhe.
Yenza izinqubo ezidingekayo uma kwenzeka ukumiswa kokuhamba.
10. Uma umdlali ongaboni kahle engasebenzisi umsizi, umdlali onombono angacela omunye umuntu ukuthi athathe umthwalo wokufeza izibopho ezishiwo kumaphoyinti 9.a no-9.b.
I-Chess ibusa i-960
F1 Ngaphambi komdlalo we-Chess960, indawo yokuqala ibekwa ngokungahleliwe, ngokuya ngemithetho ethile. Ngemuva kwalokho, umdlalo udlalwa ngendlela efanayo ne-classical chess. Ikakhulu, izingcezu nezidladla zineminyakazo yazo ejwayelekile, futhi inhloso yomdlali ngamunye ukuhlola inkosi yomphikisi.
Izidingo zesikhundla sokuqala
Indawo yokuqala i-Chess960 kufanele ilandele imithetho ethile. Izidladla ezimhlophe kufanele zibekwe emgqeni wesibili njengaku-chess ejwayelekile. Zonke izingcezu ezimhlophe ezisele zibekwe ngokungahleliwe kulayini wokuqala, kepha ngemikhawulo elandelayo:
Inkosi ibekwa ndawo thile phakathi kwale mibhoshongo emibili, futhi
Ababhishobhi babekwa ezindlini ezinemibala ehlukile, futhi
Izingcezu ezimnyama zibekwa ngqo maqondana nezicucu ezimhlophe.
Isikhundla sokuqala singakhiqizwa ngaphambi kokuhamba, kungaba ngohlelo lwekhompyutha noma ngokusebenzisa idatha, imali noma amakhadi, njll.
Imithetho ye-Chess960 castling
I-Chess960 ivumela umdlali ngamunye ukuthi aphonse kanye ngomdlalo ngamunye, enkosini ehlangene futhi anyakaze ngokuhamba okukodwa. Kodwa-ke, ezinye izincazelo zomdlalo wakudala we-chess ziyadingeka ekuphoseni, ngoba imithetho yendabuko ithatha isikhundla sokuqala senkosi ne-rook esivame ukungasebenzi kuma-chess angama-960.
Ku-Chess960, ngokuya ngesikhundla senkosi kanye ne-rook ngaphambi kwe-castling, i-castling yenziwa kusetshenziswa enye yezindlela ezine:
Ukuhamba kwedwala kabili: ukuhamba nenkosi kulandelwe ukuhambisa nge-rook.
Ukujikijela ngokushintsha: ukushintshanisa isikhundla senkosi naleso se-rook.
I-Castling ngenkosi eyodwa ehambayo: Yenza inkosi eyodwa kuphela ihambise.
Sakaza ukunyakaza kombhoshongo owodwa: Yenza ukuhambisa kombhoshongo okukodwa kuphela.
Lapho iphonswa ebhodini lomzimba elinomuntu ophikisana naye, kunconywa ukuthi inkosi isuke ebusweni bebhodi eduze nendawo yayo yokugcina, i-rook izosuka endaweni yayo yokuqala iye endaweni yayo yokugcina, futhi ekugcineni inkosi izobekwa. Indawo oya kuyo ekhaya.
Ngemuva kwe-castling, izikhundla zokugcina ze-rook nenkosi zizofana ncamashi naku-chess yakudala.
Ngakho-ke ngemuva kwe-castling enkulu (eyaziwa njenge-0-0-0 futhi yaziwa njenge-queen-side castling ku-orthodox chess, inkosi isendlini c (c1 emhlophe no-c8 emnyama) futhi i-rook endlini d (d1 okumhlophe no-d8 kumnyama) Ngemuva kokuphonswa esigcawini esingu-g
(owaziwa njengo-0-0 futhi waziwa njenge-king-side castling ku-orthodox chess), inkosi isesikweleni esingu-g (g1 esimhlophe no-g8 kumnyama) kanti i-rook izoba kusikwele f (f1 okumhlophe no-f8 kumnyama).
1. Ukugwema noma yimaphi amaphutha, kungakuhle ukuthi uthi "Ngizokwethula" ngaphambi kokwenza isithembiso.
2. Ezikhundleni ezithile zokuqala, inkosi noma i-rook (kodwa hhayi zombili) azihambi ngesikhathi sokuphosa.
3, ezindaweni ezithile zokuqala, ukusakaza kungenziwa ngaphambi kwesikhathi njengesinyathelo sokuqala.
Zonke izikwele eziphakathi kwezikwele zokuqala neziphelayo zenkosi (kufaka isikwele esiphelayo), nazo zonke izikwele eziphakathi kwezikwele zokuqala nokuphela zerokhi (kufaka phakathi isikwele esiphelayo), kumele zingabi nalutho, ngaphandle kwenkosi nezikwele .
Kwezinye izikhundla zokuqala, ezinye izikwele, obekufanele ngabe azinamuntu ku-chess yendabuko, zingahlala ngesikhathi se-castling. Isibonelo, ngemuva kwe-castling enkulu, kungenzeka, izindlu a, boe zisahlala, futhi ngemuva kwesakhiwo esincane kungenzeka ukuthi izindlu kanye / oh zihlala.
Imihlahlandlela uma kwenzeka umdlalo udinga ukuhlehliswa
1. Uma umdlalo ungapheli ekupheleni kwesikhathi esibekiwe somdlalo, unompempe kufanele anqume ukuthi umdlali unesikhathi sokudlala, "avale" umnyakazo olandelayo. Umdlali kufanele abhale ukunyakaza kwakhe kuspredishithi ngokubhala okungaqondakali, afake ispredishithi sakhe nesipredishithi somphikisi emvilophini, ayivale futhi ngemuva kwalokho kuphela amise iwashi, ngaphandle kokuqala iwashi lomphikisi.
Inqobo nje uma iwashi lingapheli, umdlali unelungelo lokushintsha ukunyakaza kwakhe okuyimfihlo. Uma, ngemuva kokwaziswa ngunompempe ukuthi isenzo esilandelayo sizoba yimfihlo, umdlali athathe isinyathelo ebhodini, kufanele akuqophe kuspredishithi sakhe njengokuhamba kwakhe okuyimfihlo.
YEBO. Unompempe uzobheka ukuthi umdlali ithuba lakhe lokudlala, ofuna ukumisa ukudlala ngaphambi kokuphela kweseshini, usebenzise sonke isikhathi esisele ukuqeda iseshini.
2. Imvilophu kufanele ikhombise:
isikhundla esandulela ukunyakaza okuyimfihlo, futhi
izikhathi ezisetshenziswa abadlali, futhi
igama lomdlali owenza ukunyakaza okuyimfihlo, futhi
inombolo yokunikezwa eyimfihlo kanye
ukunikezwa uthayi, uma ngabe isiphakamiso senziwe ngaphambi kokuba umdlalo umiswe, futhi
usuku, isikhathi nendawo yokuqalisa umdlalo kabusha.
3. Umlamuli kufanele aqinisekise ukunemba kolwazi oluqukethwe emvilophini futhi ubhekele ukulugcina luphephile.
4.Uma umdlali ephakamisa uthayi ngemuva kokuthi umphikisi enze ukuhamba okuyimfihlo, isiphakamiso sihlala sisebenza kuze kube yilapho umdlali esamukela noma esenqaba, ngokuya nge-Article 9.1.
5Ngaphambi kokuqala kabusha komdlalo, isikhundla ngokushesha ngaphambi kokuhamba okuyimfihlo kufanele sibekwe ebhodini futhi, ngaphezu kwalokho, isikhathi esisetshenziswe ngabadlali lapho umdlalo umisiwe kumele siboniswe emawashi.
6.Uma ngaphambi kokuqala kabusha komdlalo, abadlali badweba ngokuvumelana, noma omunye wabadlali azisa onompempe ukuthi uyahamba, umdlalo usuphelile. Imvilophu kufanele ivulwe kuphela uma umdlali okufanele aphendule ngokuhamba okuyimfihlo ekhona.
Ngaphandle kwamacala ashiwo kuma-athikili 5, 6.9 no-9.6, umdlalo ulahlekelwa ngumdlali onerekhodi lakhe lokunyakaza eliyimfihlo
ngamanga, kangangokuba incazelo yawo yangempela ayinakusungulwa, noma
Uma uqala kabusha umdlalo
isidlali sokuphendula ukuhamba okuyimfihlo sikhona, imvilophu iyavulwa, ukunyakaza okuyimfihlo kwenziwa ebhodini bese ebeka iwashi lakhe.
umdlali okufanele aphendule ngokuhamba okuyimfihlo akekho, iwashi lakhe kumele livulwe. Lapho efika, umdlali angamisa iwashi lakhe abize unompempe. Imvilophu iyavulwa bese kuthi ukunyakaza okuyimfihlo kwenziwe ebhodini. Iwashi lakho bese liqala.
Umdlali owenze imnyakazo eyimfihlo akekho, umphikisi wakhe unelungelo lokuphendula kuspredishithi sakhe, avale ispredishithi sakhe emvilophini entsha, amise iwashi lakhe aqale umphikisi, esikhundleni sokuphendula ngendlela ejwayelekile . Kulokhu, imvilophu entsha kufanele igcinwe kunompempe futhi ivulwe ngemuva kokufika kwalowo ophikisana naye.
7. Umdlali kufanele alahlekelwe ngumdlalo uma efika ebhodini isikhathi esingaphezu kwehora elilodwa ukuqala kabusha komdlalo omisiwe (ngaphandle kokuthi imithetho yomncintiswano icacisa noma unompempe ethatha isinqumo ngenye indlela)
Kodwa-ke, uma umdlali obambe uphawu lokuyimfihlo kungumdlali wephuzile, umdlalo uphela ngenye indlela uma:
umdlali ongekho uyinqoba ngenxa yokuthi isenzo sakhe esiyimfihlo sabulala umphikisi, noma
umdlali obengekho uveze ukudonsa ngoba isenzo sakhe 'siminzise' inkosi yomphikisi, noma isikhundla njengoba kuchaziwe ku-Article 9.6 kuholele ebhodini, noma
Umdlali okhona ebhodini ulahlekelwe ngumdlalo ngokuya nge-Article 6.9.
Uma imvilophu equkethe ukunyakaza okuyimfihlo inyamalale, umdlalo kufanele uqalwe phansi usendaweni lapho umisiwe khona futhi nezikhathi ezikumawashi zibekiwe ngesikhathi sokuhlehliswa. Uma isikhathi esisetshenziswe ngabadlali singeke sikwazi ukusetha kabusha, amawashi kufanele alungiswe ngokokubona kukanompempe. Umdlali ovimbe lesi sinyathelo esiyimfihlo wenza isenzo esithi "siyimfihlo" ebhodini.
Uma kungenakwenzeka ukusetha kabusha isikhundla, umdlalo ukhanseliwe futhi kufanele kudlalwe umdlalo omusha.
Uma, lapho uqala kabusha umdlalo, isikhathi esisetshenzisiwe sikhonjiswe ngokungalungile kunoma yimaphi amawashi futhi uma omunye wabadlali eyisayina ngaphambi kokuthatha isinyathelo sokuqala, iphutha kufanele lilungiswe. Uma iphutha linganakwa, umdlalo kufanele uqhubeke ngaphandle kokulungiswa, ngaphandle kokuthi umpempe abone ukuthi imiphumela izoba mibi kakhulu.
Isikhathi seseshini ngayinye yomdlalo esilengisiwe sizolawulwa yiwashi likanompempe. Izikhathi zokuqala nezokugcina kufanele zimenyezelwe ngaphambi kwesikhathi.
I-Videogiochi isakaza nge-Cloud Gaming di Stadia, iGeforce Manje, i-Playstation Manje